Izindaba - Ukuthuthukiswa nokusetshenziswa kwe-mica yokwenziwa
I-Mica yigama elijwayelekile lamaminerali alayishwe nge-silicate, anezici zokufakwa, ukungafihli, ukumelana nokushisa, ukumelana nokugqwala, ukuhlukaniswa okulula nokuhlubula futhi kugcwele ukuqina. It is kabanzi izimonyo, amapulasitiki, iraba, ezinengilazi, ukuvimbela ukugqwala, umhlobiso, Welding, ekubunjweni, izinto zokwakha kanye neminye imikhakha, ukudlala indima ebalulekile kwezomnotho nokwakhiwa kwezokuvikela.
Ukucwaninga nokuthuthukiswa kwe-mica yokwenziwa
Ngokusho kwe- "synthetic mica", ngo-1887, ososayensi baseRussia basebenzise i-fluoride ukuhlanganisa isiqeshana sokuqala se-fluoropoly mica kusuka ekuncibilikeni; Ngo-1897, iRussia yafunda ngesimo sesimo se-mineralizer action. Ngo-1919, inkampani yaseGerman Siemens - Halske yathola ilungelo lobunikazi lokuqala I-mica yokwenziwa; I-United States ithathe yonke imiphumela yocwaningo mayelana ne-mica yokwenziwa ngemuva kwempi yezwe yesibili .Sezingeni eliphakeme lokumelana nokushisa, kuyinto ebalulekile yokuvikela nobuchwepheshe, izwe lase-United liqhubekile nokucwaninga kulo mkhakha.
Esigabeni sokuqala i-pg China, i-mica yemvelo inganelisa umnotho wezwe nentuthuko. Kodwa-ke, ngokuthuthuka okusheshayo kwamandla, imboni ye-aerospace, i-mica yemvelo ibingasakwazi ukuhlangabezana nezidingo. Ezinye izikhungo zaseChina zaqala ukutadisha i-mica yokwenziwa.
Izikhungo zokucwaninga zesayensi kanye nezikole, ohulumeni namabhizinisi zenza ucwaningo nokukhiqizwa kwe-mica yokwenziwa kungene esigabeni esivuthiwe kuze kube manje.
II. Izinzuzo zokwenziwa kwemicah kuqhathaniswa ne-mica yemvelo
(1) Izinga elizinzile ngenxa yefomula efanayo nenani lezinto zokusetshenziswa
(2) Ukuhlanzeka okuphezulu nokugqokwa; awukho umthombo wemisebe
(3) Insimbi esindayo encane, hlangana nezinga lombuso laseYurophu nelase-United.
(4) ubukhazikhazi High nobumhlophe (> 92), impahla yesiliva pearl sombala.
(5) Okubalulekile kwe-pearly ne-crystal pigment
III. Ukusetshenziswa Okuphelele Kwe-Mica Yokwenziwa
Emkhakheni we-mica, kuyadingeka ukuthi usebenzise ngokuphelele isigaxa se-mica eceleni kweshidi elikhulu le-mica Nakhu ukusetshenziswa okuphelele kwe-mica yokwenziwa njengokulandelayo:
Izici: Ukuslayida okuhle, ukumbozwa okuqinile nokubambelela.
Isicelo: ukumboza, i-ceramic, anti-corrosion kanye nemboni yamakhemikhali.
IHuajing synthetic mica ingumnikazi wokwakhiwa okuphelele, okusobala nobukhulu besilinganiselo, okuyizinto ezingcono kakhulu zepharele lesikhumba.
(2) Zokwenziwa mica ngobumba
Zokwenziwa mica zobumba uhlobo lwenhlanganisela, olunezinzuzo ze-mica, i-ceramics kanye nama-plastiki. Ingumnikazi wokuqina kobukhulu, ukwahlukanisa okuhle, nokumelana nokushisa.
(3) imikhiqizo Ekubunjweni
Luhlobo olusha lwezinto zokuvikela izinto ezingaphili ezinokumelana nokushisa okuphezulu, kanye ne-anti-corrosion.
Inzuzo: ukwahlukanisa okuphezulu, amandla emishini, ukumelana nemisebe, ukumelana ne-oxidation njalonjalo.
(4) Mica Zokwenziwa ugesi ipuleti
Lokhu kuyinto entsha esebenzayo, eyenziwe ngokumboza ungqimba lwefilimu ye-semiconductor kupuleti le-mica lokwenziwa. Njengempahla yezinto zasendlini, ayinantuthu futhi ayinambitheki ngaphansi kwezinga lokushisa okuphezulu, ngakho-ke isetshenziswa kabanzi futhi ithuthukiswe ngokushesha kulezi zinsuku.
(5) Zokwenziwa mica pearl sombala
Njengoba i-mica yokwenziwa iyinto yokufakelwa, impahla eluhlaza ingahle ibe nokulawula okuhle. Ngakho-ke, insimbi esindayo nezinye izinto eziyingozi zingavinjelwa kusukela ekuqaleni .I-mica yokwenziwa inebumsulwa obuphezulu, ubumhlophe, ubukhazikhazi, ukuphepha, okungeyona into enobuthi, ukuvikelwa kwemvelo, nokumelana nokushisa okuphezulu .Yisetshenziswa kakhulu ekuhlanganiseni, epulasitiki, isikhumba, izimonyo, izindwangu, i-ceramic, isakhiwo kanye nemboni yokuhlobisa.Ngokuthuthuka okwandayo kobuchwepheshe be-mica, kunomphumela omuhle empilweni yansuku zonke, izimboni ezihlobene nazo zizokhuthaza ngokushesha.